दुई सन्तानको आमा बनेपछि फिल्ममा फेरि कमब्याक गर्दै प्रीति जिन्टा ! « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
दुई सन्तानको आमा बनेपछि फिल्ममा फेरि कमब्याक गर्दै प्रीति जिन्टा !
५ मंसिर २०७८, आईतबार ००:००
पछिल्लो समयमा फिल्मक्षेत्रबाट केही टाढिएकी बलिउड अभिनेत्री प्रिती जिन्टा फेरि बलिउड फिल्ममा कमब्याक गर्दैछिन् । अभिनेत्री जिन्टा फिल्म निर्माता दानिश रेन्जुको फिल्मबाट बलिउडमा कमब्याक गर्न लागेको एक रिपोर्टले जानकारी दिएको छ ।
उनले अभिनय गर्न लागेको फिल्मको नाम भने अझै फाइनल भएको छैन । यो फिल्मको कथा कश्मीरमा आधारित छ । एक रिपोर्टका अनुसार फिल्मको बारेमा अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक घोषणा भइसकेको छैन तर फिल्मको प्रि–प्रोडक्सन र कास्टिङको काम सुरु भएको छ ।
फिल्मको छायांकन सन् २०२२ मा सुरु हुनेछ ।प्रीति जिन्टा कश्मीरमा सेट गरिएको ‘वीर जारा’ र ‘मिशन कश्मीर’ जस्ता फिल्ममा काम गरिसकेकी छिन् । अ
बको फिल्म पनि उनले त्यहीँ सुटिङ गर्ने प्रीतिको नजिकको स्रोतले बताएको छ, “प्रीति थप प्रोजेक्टमा काम गर्न तयार छिन्। उहाँसँग पहिले नै २-३ फिल्म पाइपलाइनमा थिए र अब उनी थप प्रोजेक्टहरू साइन गर्न तयार छिन्।“ यसअघि प्रीति २०१८ मा फिल्म ‘भैयाजी सुपरहिट’ मा भएकी थिइन् ।
गएको बिहीबार मात्रै प्रीति सरोगेसी मार्फत जुम्ल्याहा बच्चाकी आमा बनेकी छिन् ।
प्रकाशित मिति: Nov 21, 2021
क्याट्रिना-विक्कीको विवाहमा फोन निषेध गर्नुको यस्तो छ कारण थाहापाउनुहोस् !
पछिल्लो समयमा बलिउडका द्धय कलाकार क्याट्रिना कैफ र विक्की कौशलको विवाहको बलिउड खबरले बजार तातिरहेको
अभिनेत्री प्रियंका र निकको विवाहको ३ वर्ष पुरा, क्यान्डललाइट डिनरको आयोजना !
बलिउड तथा हलिउड अभिनेत्री प्रिंयका चोपडा र अमेरिकी गाएक निक जोनसको विवाह भएको आज ३
तान्जानियाका टिकटक स्टार दाजु बहिनीलाई बलिउडमा अफर !
पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जालमा तान्जानियाका दाजु बहिनी भाइरल भइरहेका छन् । उनीहरु सोसल मिडियामा भाइरल
हत्या गर्ने धम्की दिनेविरुद्ध कंगनाले दिइन् उजुरी, उनले भनिन्, ‘म डराउने खालकी होइन’
बलिउड अभिनेत्री कंगना रनौटलाई हत्या गर्ने धम्की दिइएको छ । कंगनलाले धम्की दिएपछि प्रहरीलाई धम्की
जान्नुहोस् : क्याट्रिना-विक्कीको विवाहमा को-को सहभागी हुदैछन् !
बलिउडका कलाकारहरु क्याट्रिना कैफ र विक्की कौशलको विवाहको खबरले बजार तातिरहेको छ । कलाकार द्धयको
सलमानको ‘अन्तिमः द फाइनल ट्रुथ’ रिलिज भएपछि प्रशंसकले हलभित्रै गरे आतिशबाजी, नायकले गरे बिन्ती
बलिउड अभिनेता सलमान खान र आयुष शर्मा स्टारर ‘अन्तिमः द फाइनल ट्रुथ’ शुक्रबार रिलिज भएको
एमसीसी पास गर्न मंसिर २८ मा दुवै सदनको बैठक आव्हान गरीएको खुलासा
अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरले गरीन् कक्षा १२ पास
एमालेले निष्काशन गरेका सांसद संसदमा गए प्रतिनिधिसभा चल्न दिँदैनौं : ओली